Isiokwu Russell Artzt na Martech Zone |
Edemede site na Russell Artzt
Russ Artzt bu onye nchoputa na onye isi nke Ndị mmekọ Dijitalụ, onye ya na Vince Re, Chief Technologist, mepụtara usoro ngwanrọ nke igwe ojii iji nyere ụlọ ọrụ aka ijikwa gburugburu ebe obibi dijitalụ ha.
Ọgba aghara na-ezo na ụwa dijitalụ. Companylọ ọrụ ọ bụla nwere ike tufuo ngwa ahịa nke dijitalụ ya na oge mgbe ndebanye aha na-eme n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche yana mgbe njikọta na nnweta na-agbakwunye weebụsaịtị ọhụrụ na ngwakọta. Ngalaba edebanyere aha na enweghi mmepe. Weebụsaịtị nke na-aga ọtụtụ afọ na-enweghị mmelite. Ozi agwakọtara gafee usoro ntanetị. Mmefu na-enweghị ego. Ego ole furu efu. Ọ bụ obodo na-eme mkpọtụ. Ọnụọgụ dijitalụ ụlọ ọrụ na-agbanwe mgbe niile, na-esochikwa egwu